"Liverpool Waa Mid Ka Mida Kooxaha Ugu Fiican Taariikhda PL" Waxaa Sidaasi Yidhi Michael Owen? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Liverpool ayaa hoos ugu dhaceysa iyagoo ka mid ah kooxaha ugu fiican taariikhda Premier League, sida uu qabo weeraryahankii hore Michael Owen.
Kooxda Jurgen Klopp ayaa loo caleemo saaray khamiista khamiista ka dib markii Manchester City ay guuldarro 2-1 ka soo gaartay Chelsea garoonka Stamford Bridge.
Waxay calaamad u tahay horyaalkii ugu horreeyay ee Liverpool tan iyo 1990, waxayna waddo u hayaan inay rikoor ka dhigaan inta badan dhibco xilli ciyaareed Premier League ah.
Owen, oo u dhaliyay kooxda in ka badan 150 gool kooxda sideed xilli ciyaareed, ayaa amaaney Klopp iyo kooxdiisa “Waa wax aan la rumeysan karin. Waa koox fiican, waa koox fiican, waa la sugayay xilligan waqti dheer,” ayuu u sheegay Optus Sport.
“Jurgen Klopp, waa halyeey gundhig u ahaa tababare uu u soo noqday. Horyaallada yurub iyo haatan waxay heystaan ​​midkii ay waqtigaas oo dhan rabeen, kooxda difaacaneysa Premier League, waa waxa qof walba uu doonayo waqti dheer iyo aniga. waan hubaa in Merseyside ay gabi ahaanba isbadaleyso waqtigan sidaa darteed waa inay noqotaa.
Ciyaartoyda waxaay mudan yihiin amaan weyn, waxay aheyd xilli adag laakiin waa ay ka fogaadeen waana kooxda ugu fiican, stats ayaa cadeyn doonta taas, taariikhdu hoos ayey u dhici doontaa iyadoo ka mid ah kooxaha ugu fiican Premier League ee aan aragnay.
“Jurgen Klopp, wuxuu kaliya u qaaday kooxdan heer sare sidaa daraadeed 30, 40 sano ka hor markii Liverpool ay laheyd kooxo waa weyn, waxaan u maleynayaa in Merseyside ay tahay wax aan macquul aheyn oo ku faanta waxa ay haatan heystaan.”
Liverpool ayaa hogaanka ku heysa 23 dhibic oo aan laga badin karin iyadoo 7 kulan ay u harsan tahay inay ciyaaraan.